२० वर्षे लक्का जवान देखिन सलमान खान गर्दैछन् यस्तो हर्कत !
एजेन्सी । बलिउडका चर्चिच अभिनेता हुन् सलमान खान । उनको पछिल्लो पटक रिलिज भएको फिल्म भारतले दर्शकको मन जित्न सफल भएको थियो । पछिल्लो समय उनी सोशल मिडियामा एकदमै सक्रिय देखिएका छन् ।
फिल्म नपाएपछि तनावमा छन् शाहरुख खान
एजेन्सी । शाहरुख खान पछिल्लो समय कामबिहिन भएका छन् । उनको पछिल्लो समय रिलिज भएको फिल्म जिरोले पनि बक्स अफिसमा खासै कमाल गर्न सकेन ।
यसरी बलिउडमा भाग्य चम्किएको थियो शाहरुख खानको
बलिउडमा हाल सलमान खानको प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही पनि देखिएका छ्रैनन् । एकपछि अर्को गर्दै उनका फिल्महरुले ठुलो व्यापारिक सफलता पाइनै रहेका छन् । तर, उनले यस्ता केही फिल्महरु खेल्न अस्वीकार गरे जसको पश्चाताप आज पनि उनी गरिरहेका छन् ।
'शाहरुखलाई एउटै डर थियो'
सलमान खान किन कालो रंगको कपडामात्र लगाउँछन् ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता प्राय जसो कालो कपडामा देखिन्छन् । प्राय जसो जिन्स र टिसर्टमा देखिने उनको यो बानीबारे उनका डिजाइनरले खुलासा गरेका छन् ।
यी मोटी अभिनेत्रीले यसरी घटाएकी थिइन् तौल
किन दराजमा लुकेका थिए सलमान खान ?
बलिउड स्टार अभिनेता हुन् सलमान खान । उनी अझै पनि अविवाहित रहेका छन् । प्रेमिकासँगको विवाद र अफयेरका कारण प्राय चर्चामा आउने सलमान खानले आफ्नो व्यक्तिगत एउटा किस्सा सुनाएका थिए । उनले ‘दश का दम’ सो उक्त घटना सेयर गरेका थिए ।
यी हुन् आमिर खानका सबैभन्दा झुर फ्लप फिल्महरु
मुम्बई । बलिवुडका मिस्टर पर्फेक्सनिस्ट आमिर खानका प्राय फ्लिम चर्चामा आँउछन् । उनी पछिल्लो फिल्म ‘थंग्स अफ हिन्दुस्थान’ लाई लिएर निकै चर्चामा थिए ।